Sayniska Caafimaadka - VANTAGE | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Waxaa ka socda Vimeo ...
Ardayda waxay kaqeybgalaan khibradaha la xiriira sayniska si ay u fahmaan fursadaha shaqo ee mustaqbalka ee qeybta koritaanka dhaqaalaha. Marka lagu daro shaqadooda koorsada ee AP Psychology iyo Human Anatomi, ardaydu waxay ku kasban karaan shahaado sida kalkaaliye kalkaaliye caafimaad oo ka diiwaangashan ama jawaab bixiyaha caafimaad ee degdega ah. Shahaadadan waxay ardayda siisaa tababar horumarsan iyo bilow bilow ah oo ku saabsan meheradda daryeelka caafimaadka.
Ardayda waxaa la siiyaa tilmaamo marti ah oo joogto ah waxayna ka qeyb galaan booqashooyinka hogaamiyayaasha sayniska caafimaadka sida Jaamacadda Minnesota, Isbitaalka Caruurta ee Minnesota iyo Excelen Center for Bone & Joint Research. Ardaydu waxay si buuxda u fahmaan cilmu-nafsiga iyo nidaamka bini-aadamka, oo ay kujiraan aragti guud oo ku saabsan xirfadaha badan ee la heli karo sida xirfadle daryeel caafimaad mustaqbalka. Barnaamijkan waxaa lasiiyaa dhalinyarada iyo waayeelka.
Sanad-sanadka, 2.25 koorsada amaahda ayaa kasbata:
AP Psychology (1 dhibic xagga cilmiga bulshada)
Kaaliyaha Kalkaaliyaha Caafimaad ee Diiwaangashan ama Jawaab Caafimaad oo Degdega ah
Macallimiinta martida ayaa bixiya khibrad ku saabsan mowduucyada ku habboon manhajka VANTAGE. Macallimiintu waxay u adeegsadaan qaab ugu horreeya ee barashada, oo kuu oggolaanaya inaad maamusho maadada aasaasiga ah ee aqoonta, ka dibna arag sida ay u hirgaliso wada-hawlgalayaasha ganacsigu si ay u bixiyaan xalalka caqabadaha dunida ka jira.
Faafinta iyo Xiriirka
Dhamaan ardayda VANTAGE waxay leeyihiin lataliye 1: 1 ah, laakiin isku xirnaanta ayaa ka badan hal xirfadle. Kormeerayaashu had iyo goor waxay albaabada u furaan iyo barayaasha soo booqda intaba si xor ah ayey u wadaagaan macluumaadkooda xiriirka, qaarkood waxay bixiyaan shaqo iyo booqashooyin booqdo oo dheeri ah.
Soo degso Xaashiyaha VANTAGE
Aagagga waxbarasho /
Janawari 21, 2021 6pm Webinar: Macluumaadka VANTAGE